Mega Lifesciences Supports Thousands of Nat C Bottles to Frontline Health Workers who fight against Covid-19 Pandemic – LYCA COMMUNICATIONS
Mega Lifesciences Supports Thousands of Nat C Bottles to Frontline Health Workers who fight against Covid-19 Pandemic
Date: July 27, 2020Author: Rahul0Comments
Yangon – July 27, 2020 – Mega Lifesciences,apharmaceutical company,announced today that it has donatedthousands of Vitamin C 1000 mgNat C tablets to the health workers, working onthe frontlines at thehospitalsand medical labs during the times of Covid-19 pandemic.
The donation includes 1,440 Nat Cbottlescontaining 30 tabletsper bottle – handed over mainly to the health workers who are working in the various hospitals and medical labs across Yangon.
The handover of Vitamin C 1000mg Nat C weretaken place at various hospitalsand medical labs in Yangon including South Okkalapa General HospitalCovid Center,Waibargi General HospitalCovid Center,New Yangon General Hospital, Insein General Hospital, Yangon General Hospital,(500)-Bed Yangon Specialist Hospital, West Yangon General Hospital, North Okkalapa General Hospital, Thingangyun General Hospital, National Health Laboratory,and Yangon Fever Clinic Central.
Mega Lifesciences Limitedstated that the donations can supply well over thousands of health workers on the front lines and improve their immunity to protect from external pathogens and viruses during the fight against the Covid-19 pandemic.
The role of health workers is crucial in the fight against Covid-19. Therefore, the donations are mainly to support the health and well-being of the health workers, who are working on the front lines at the hospitals and medical labs, and risking their lives to keep the public safe.
“Our sincere thanks to Mega Company for their great initiative to donate Vitamin C 1000 mg Nat C especially to the health workers who are working at the frontline during this Covid-19 Pandemic,” said Prof Doctor, Zaw Lynn Aung, First Commander of Clinical Management Team from Phaunggyi Covid Medical Center and Head of Department from University of Medicine (1) Yangon.
Nat C contains natural Vitamin C 1000 mg, which provides the best immunity. It is also suitable for people with gastrointestinal problems because it has low acidic due to containing Rosehip, buffered form of Vitamin C that gentle on the stomach.
Taking one Nat C tablet daily afterameal will increase the immune system, protection against cold, influenza, and refreshing the mind.
About Mega Lifesciences Limited
Mega Lifesciences Limited is headquartered in Thailand and established in 1982. It has branches in 31 countries worldwide. From its manufacturing facilities located in Australia and Thailand, it distributes world-class quality nutritional & supplement that are safe and effective for millions of people worldwide. In addition, the company is actively involved in the use of products that are not harmful to consumers and the earth. Not only in Myanmar, Mega Lifesciences Ltd is engaged in manufacturing, marketing,selling, anddistributingquality pharmaceutical,nutraceutical products,and Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)across the globe.
Covid-19တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးလျှက်ရှိ သောဝန်ထမ်းများအတွက် Mega Lifesciences မှ Nat C ဆေးဗူးများထောက်ပံ့လှူဒါန်း
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် (၂၇) ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် –Mega Lifesciences Ltd (Myanmar) ဆေးဝါးကုမ္ပဏီကြီးမှကမ္ဘာ့ကူးစက်မှု ရောဂါCovid-19 ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးလျှက်ရှိသော ဆေးရုံများ၊ ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအား ဗီတာမင်စီ (၁,၀၀၀) မီလီဂရမ် Nat C ဆေးဗူးများကို လှူဒါန်းပေးခဲ့ကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။
ဆေးတစ်ဗူးတွင် ဆေးတောင့် (၃၀) ပါဝင်သည့် Nat C ဆေးဗူးပေါင်း (၁,၄၄၀)အား ရန်ကုန်မြို့အနှံ့ အပြားရှိဆေးရုံများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် တာဝန်များထမ်းဆောင်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ကာ ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဗီတာမင်စီ (၁,၀၀၀) မီလီဂရမ်Nat C အားတောင်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီး Covid အထူးကုစင်တာ၊ ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီး Covidအထူးကုစင်တာ၊ ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံသစ်ကြီး၊ အင်းစိန်ဆေးရုံ၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကုတင်(၅၀၀) ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းဆေးရုံ၊ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံ၊ သင်္ကန်းကျွန်းဆေးရုံတို့မှ ဆေးပညာဌာနများ၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် ရန်ကုန်ဖျားနာလူနာများကုသမှု(ဗဟို) အသီးသီးတို့တွင် လှူဒါန်းခဲ့ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Covid-19 တိုက်ဖျက်ရေးကာလအတွင်း ရှေ့တန်းမှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးလျှက်ရှိသည့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား ယခုကဲ့သို့ လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးသွားခြင်းဖြင့် ပြင်ပရောဂါပိုးမွှားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို ကာကွယ်နိုင်သောကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Mega Lifesciences Ltd မှ ပြောကြားသည်။
Covid-19အားတိုက်ဖျက်ရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အရေးကြီးပါ သည်။ ဆေးရုံနှင့် ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းများရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏အသက်ကို ပဓါနမထားပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး၊ ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ကာ ယခုကဲ့သို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
“Covid-19 Pandemic ကာလမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းတာဝန်ပိုမိုထမ်းဆောင်နိုင်ရေး အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် ဗီတာမင်အားဖြည့်ဆေး ဗီတာမင်စီ Nat C ကိုလှူဒါန်းပေးတဲ့ Mega Companyကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်”ဟု ဖောင်ကြီး Covid Medical Centerမှ Clinical Management Team ၏ First Commander ဖြစ်သူ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်၊ ဆေးပညာဌာန ပါမောက္ခဌာနမှူးဒေါက်တာ ဇော်လင်းအောင် မှ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Mega Lifesciences Ltd မှ Nat C တွင် သဘာ၀ ဗီတာမင်စီ (၁,၀၀၀) မီလီဂရမ် ပါဝင်သောကြောင့် အကောင်းဆုံးကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ရရှိစေခြင်း၊ နှင်းဆီသီးပါဝင်ပြီး Buffered Form ဖြင့်ထုတ်လုပ် ထားခြင်းကြောင့် အက်စစ်ဓာတ်လွန်ကဲခြင်း မရှိသည့်အတွက် အစာအိမ်ရောဂါရှိသူများ အတွက်လည်း သင့်တော်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Nat C (၁,၀၀၀) မီလီဂရမ် ကို တစ်နေ့တစ်လုံး အစာစားပြီးတိုင်း ပုံမှန်သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးဖျားနာများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ကိုကြည်လင် လန်းဆန်းစေခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပါသည်။
Mega Lifesciences Limited အကြောင်း
Mega Lifesciences Ltd ရုံးချုပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တည်ရှိပြီး ၁၉၈၂ခုနှစ်တွင် စတင်ထည်ထောင်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၃၁)နိုင်ငံတွင် ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။၎င်းသည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများတွင် မိမိပိုင်စက်ရုံများမှကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ သန်းပေါင်းများစွာသောလူသားများအတွက် အန္တရာယ်ကင်းပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ အရည်အသွေးမြင့် အာဟာရနှင့် ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးများကို တင်သွင်းဖြန့်ချီလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများနှင့် ကမ္ဘာမြေအတွက်ပါ ဆိုးကျိုးမရှိသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Mega Lifesciences Ltd အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသာမကကမ္ဘာတစ်လွှားသို့ အရည်အသွေးမြင့်ဆေးဝါးများ၊ ဖြည့်စွက်ဆေးစာများ၊ အာဟာရဖြည့်အစာများနှင့် Fast Moving Consumer Goods (FMCG) များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ စျေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
Covid-19DonationJulyLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMega LifesciencesMyanmarMyanmar PR AgencyPandemicPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaYangon
Previous Previous post: Ferrovit Myanmar Donates Thousands of Medicine Boxes to Chit Thu Wai’s Khit Thit Foundation to Support Needy People